तपाई पनि सम्बन्ध अगाडी बढाउन चाहनुहुन्छ ? - HelloKhabar
तपाई पनि सम्बन्ध अगाडी बढाउन चाहनुहुन्छ ?
अब तपार्इ आफ्नो साथीसगं सम्बन्ध अगाडी बढाउन छ भने अब देखि सरी नभन्नु भए हुन्छ । सरी भन्नु भन्दा अरुनै उपाय अपनाएको खण्डमा उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अमेरिकाको बेलर युनिभर्सिटीमा भएको एउटा रिसर्चले सरी भन्नु भन्दा आफ्नो साथीलाई केही अधिकार र आफुमा निकट आउन वातावरण दिएर अगाडी बढ्नु पर्ने बताएको छ । पार्टनरमा स्वतन्त्रता दिनु , सम्मान गर्नु , आफुले गरेको गल्ती स्विकार गरेको खण्डमा सम्बन्ध अगाडी बढ्ने अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
अमेरिका टेक्‍ससको बेलर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर कीथ सेनफोर्डले यो अध्यन गरेका थिए। यो अध्यनका क्रममा विवाहित जोडीमा गरिएको थियो ।
पहिला अध्‍ययनमा १८ देखि ७७ वर्षका २५५ जना विवाहित जोडी बिचमा अध्यन भएको थियो । यी जोडी लाई सोधीएको थियो तपार्इहरुबिच कुनै द्धन्द्ध भएमा सामाधान गर्नमा लागि अपनाउने उपायको बारेमा लिस्ट तयार गर्नुहोस । यसमा सानो देखि ठुलो घटनाका समधानको बारेमा प्रश्न गरिएको थियो ।
अर्को अध्यनमा १९ देखि ८१ वर्षका ४९८ जना विवाहित बिच अध्यन गरिएको थियो । यि दुई बिच गरिएको अध्यनबाट के देखियो भने झगडा समाधानको लागि पहिलो अध्यनमा जुन सामाधानको लिस्ट दिएका थिए दोस्रो मा पनि त्यहि उपाय हरुको लिस्ट प्राप्त भएको थियो ।
यसको साथै अध्यनबाट सम्बन्ध बिस्तारका लागि आफ्नो पार्टनर लाई धेरै समय दिनु , एक अर्काको विरोधी नहुनु र एक आपसमा निरन्तर रुपमा कुराकानी हुनु आवश्यक रहेको अध्यनले बताएको छ । यस अध्यनमा सरी भन्ने शब्द सामाधान गर्न लिस्टको अन्त्यमा मात्र रहेको थियो । यस अध्यनलाइ हेर्दा लामो समय सम्म रिलेसन राख्न सरी भन्दा अन्य उपाय बढि फाइदाजनक हुने अध्यनको निष्कर्ष रहेको छ ।